Xoghayaha Arrimaha Dibadda UK oo Muqdisho ku soo fool leh – STAR FM SOMALIA
Mr Hammond ayaa la kulmi doona Madaxda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, isagoo kala hadli doona waqtiga kala guurka doorashooyinka la filayo inay Agosto ka dhacaan.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda UK ayaa sidoo kale la kulmi doona Mas’uuliyiinta Safaaradda UK ee Muqdisho, isagoo ka wareysan doona xaalada Soomaaliya iyo waxqabadkooda.
Dowladda UK ayaa dhowaan Ciidamo u soo dirtay Soomaaliya, kuwaasoo ka taageeraya Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda la dagaalanka Al-Shabaab.
Sanadkii 2012 ayay aheyd markii Xoghayihii hore ee Uk William Hague uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho, sidoo kale sanadkii 2013 ayuu Muqdisho u yimid si uu u furo Safaaradda Britain ee Muqdisho.
Dhinaca kale waxaa maalinta Jimcaha iyana lagu wadaa inuu Muqdisho soo gaaro wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan oo markii 3aad imaanaya.
Sargaal ka tirsan Al-shabaab ayaa gacanta lagu soo dhigay